N'ime ihe karịrị nde 2.87 dị na gam akporo Play Store yana ihe karịrị nde 1.96 dị na iOS App Store, anyị agaghị ekwubiga okwu ókè ma ọ bụrụ na anyị kwuru na ahịa ngwa ahụ na-arịwanye elu. N'ụzọ ezi uche dị, ngwa gị anaghị asọmpi na ngwa ọzọ site na onye na-asọmpi gị n'otu niche mana yana ngwa sitere n'ofe ahịa na niche. Ọ bụrụ n’iche, ịchọrọ ihe abụọ iji mee ka ndị ọrụ gị jigide ngwa gị - nke ha
Ọ bụ ezie na m ka na-etolite site n’oge ruo n’oge, enweghị m ikike ma ọ bụ oge ịghọ onye mmepe oge niile. Enwere m ekele maka ihe ọmụma m nwere - ọ na - enyere m aka imeri ọdịiche dị n'etiti ihe mmepe na azụmaahịa ndị nwere nsogbu kwa ụbọchị. Mana… Adighi m acho iru akwukwo. E nwere di na nwunye ihe mere na-aga n'ihu m mmemme nka abụghị oké atụmatụ: N'oge a na ọrụ m - m